ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုက်တဲ့ ကိုဗစ် အမြန်စစ်ကိရိယာ နဲ့ စစ်ခဲ့ရသူ တဦး ပြောပြ တဲ့ အတွေ့အကြုံ – Zartiman
ကိုဗစ်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပဲ ဆိုဆို တိုက်ပွဲအစပဲ ဆိုဆို ရန်ကုန်သားတွေ အနေနဲ့ အိမ်ထဲနေဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ပူးပေါင်းပေးဖို့ လိုပါတယ် ။ ဒီတိုက်ပွဲ ဟာ အစိုးရအတွက် တိုက်ပွဲ မဟုတ်ပါ။ မိမိ အသက်အတွက် တိုက်ပွဲ ဆိုတာ ကို မမေ့ပါနဲ့။အသက်ရှင်ဖို့ ရုန်းကန်ရတာ ကို Sur vive လုပ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ စစ်ပွဲမှာရှင်ကျန်ဖို့ ခက်ခဲစွာ လုပ် ရတယ်။ မုန်တိုင်းကြားမှာ ရှင်ကျန်ဖို့ လုပ် ရတာမလွယ်။ ငလျင်ဘေး မီးဘေး အစစ အရာရာ မှာ ရှင်ကျန်နေဖို့ လုပ်ရတာ ဘယ်လောက်ခက်လည်း တွေးကြည့်ပါ။ခုကိုဗစ်ဘေးက ရှင်ကျန်ဖို့ လုပ်ရတာ အလွယ် ဆုံးပါ။ အိမ်ထဲမှာ အိပ်လိုက် တီဗီ ကြည့်လိုက် စာဖတ်လိုက် နဲ့ ရှင်ကျန်အောင် လုပ်ပေးရုံ လေးပါ. ရှင်ကျန်နေဖို့ အိမ်ထဲနေလိုက်ပါ။ကျနော် တို့အလုပ်ရဲ့သဘောအရ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုဗစ် ပြန့်နှံ့မှု ဖြစ်မှာ ကြောက်ရပါတယ်။ သီး သန့်ခွဲခြားထားတဲ့နေရာ ဖြစ်နေပေမယ့်။
တဦးတယောက်မှာ ပိုးပါလာရင် HAVAC စနစ် (အလွယ်ပြောရင် Air Con စနစ် တခုထဲ) တခုထဲ မှာ နေထိုင်ရတဲ့အတွက် ဧရိယာ တခု လုံး ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက် ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆေးစစ် မှုတွေ စဉ်ဆက်မပြတ် သတိထား လုပ်ရပါ တယ်။ အမျိုးသားဓာတ်ခွဲ ခန်းရဲ့ SWAB TEST စနစ် ဟာ ဈေးများတယ်။ အချိန်လိုတယ်။ စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ အကန့်အသတ်ရှိတယ်။ တိကျသေချာ မှုတော့ ရှိတယ်။ Rapid Test တွေရဲ့ တိကျမှု ကတေ့ သေချာမှုက အရင်က ၇၈% လောက်ပဲရှိ ခဲ့တယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ၉၈% ထိ သေချာ တယ် လို့ ဖတ်ရ တယ်။ဒါကလည်း ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ပေါ် မူတည် တယ်။ ပစ္စည်းအရည်အသွေးပေါ် မူတည် တယ် ဆိုတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့ တ သောင်းမကျော် တဲ့ ပမာဏ နဲ့ စစ်ဆေးနိုင်မယ်။ အလွန်ဆုံး ၁၀ ဒေါ်လာသာသာ။ ငွေကြေးအားဖြင့် အဆများစွာ သက် သာ လာပါမယ်။
Rapid Test နဲ့စစ်ပြီး သံသယ ထပ်ရှိ မှ လက်ရှိစစ်နေတဲ့ Swab Test ကို ထပ်စစ်ရင် စစ်ဆေးရတဲ့ လူ လျော့လာ နိုင် တယ်။ စရိတ်ချုံ့နိုင် မယ်။Rapid Test မှာ စစ်လို့ Positive ဆို ရင် ခဏယာယီ ခွဲထားလိုက်ခြင်းဖြင့် လည်း ဆက်လက်ပြန့်နှုန်းကို ထိန်းနိုင် မယ်။ ကျနော် ကိုယ်တိုင် Rapid Test စစ်တာ ခံရတာ ၂ ဆင့် စစ်တယ်။ သွေးဖောက်တယ်။ပုရွက်ဆိတ် ကိုက်တာ ကမှ ပိုနာပါတယ်။ အဖုထ တယ်။ ခုက အဲလောက်မနာပါ။ သွေးစက်လေးကို Test Kit ပေါ်တင်ပြီး မိနစ် ၂၀ လောက်ဆို သွေးရဲ့ ပြန့်နှုန်းက ပထမ တလိုင်းကို ရောက်မယ်။ အဲမှာ ရပ်သွားရင် Negative ပေါ့။ အဲမှာ မရပ်ဘဲ ဒုတိယ လိုင်းထိဆက် ပြန့်ရင်တော့ လိုင်း ၂လိုင်း ပြတဲ့ Positive ပေါ့။နောက် နှာခေါင်းနှိုက် တယ်။ အဲတာက တော့ နည်းနည်း မျက်ရည်ဝဲရုံပေါ့။ အကောင်းဆုံးက စိတ်ကိုလျှော့ထားပါ။ ခေါင်းကို ငြိမ်အောင်ထားပါ။
ပါးစပ်ကို “အား “လို့ အော်သလို ဟ ပြီး အော်ပြပါ။ဒါဆို နှာလမ်းကြောင်း ရှောရှောရှုရှု ဖြစ်လာပါမယ်။ မနာပါ။၊ တို့ဖတ် Test ကို သူ့ Test kit ဘူးထဲက Gel လေးတမျိုးထဲ စိမ်ပြီး စောင့် ကြည့်ပါ တယ်။ Rapid Test စစ်ပြီး ၃ ရက်လောက် သီးသန့် နေပြီးရင် အလုပ်ထဲထွက်ခွာ ရပါတယ်။ကျနော်တို့စစ်တဲ့ အမျိုးအစားဟာ ကိုရီးယား နိုင်ငံထုတ်ပါ။ Rapid Test ဟာ မြန်တယ်။ တိကျမှု တော့ ကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်။ ၂ % ကိုတော့ ကံပေါ် ထားရပါမယ်။ လူအ များ ကြား ပြန့်နှုန်းမြှင့်ပြီး ခွဲခြားရ ခက် တဲ့ ခုလို အခါ မှာ သုံးတာ မှန်ပါ တယ်။ အလျင်မြန်ဆုံး ဆွဲထုတ်နိုင်မယ့် တခုထဲ သော နည်းပါ။
ကိုဗဈနောကျဆုံးတိုကျပှဲပဲ ဆိုဆို တိုကျပှဲအစပဲ ဆိုဆို ရနျကုနျသားတှေ အနနေဲ့ အိမျထဲနဖေို့ လိုအပျပါသေးတယျ။ ပူးပေါငျးပေးဖို့ လိုပါတယျ ။ ဒီတိုကျပှဲ ဟာ အစိုးရအတှကျ တိုကျပှဲ မဟုတျပါ။ မိမိ အသကျအတှကျ တိုကျပှဲ ဆိုတာ ကို မမပေ့ါနဲ့။အသကျရှငျဖို့ ရုနျးကနျရတာ ကို Sur vive လုပျတယျလို့ ပွောကွတယျ။ စဈပှဲမှာရှငျကနျြဖို့ ခကျခဲစှာ လုပျ ရတယျ။ မုနျတိုငျးကွားမှာ ရှငျကနျြဖို့ လုပျ ရတာမလှယျ။ ငလငျြဘေး မီးဘေး အစစ အရာရာ မှာ ရှငျကနျြနဖေို့ လုပျရတာ ဘယျလောကျခကျလညျး တှေးကွညျ့ပါ။ခုကိုဗဈဘေးက ရှငျကနျြဖို့ လုပျရတာ အလှယျ ဆုံးပါ။ အိမျထဲမှာ အိပျလိုကျ တီဗီ ကွညျ့လိုကျ စာဖတျလိုကျ နဲ့ ရှငျကနျြအောငျ လုပျပေးရုံ လေးပါ. ရှငျကနျြနဖေို့ အိမျထဲနလေိုကျပါ။ကနြျော တို့အလုပျရဲ့သဘောအရ လုပျငနျးခှငျမှာ ကိုဗဈ ပွနျ့နှံ့မှု ဖွဈမှာ ကွောကျရပါတယျ။ သီး သနျ့ခှဲခွားထားတဲ့နရော ဖွဈနပေမေယျ့။
တဦးတယောကျမှာ ပိုးပါလာရငျ HAVAC စနဈ (အလှယျပွောရငျ Air Con စနဈ တခုထဲ) တခုထဲ မှာ နထေိုငျရတဲ့အတှကျ ဧရိယာ တခု လုံး ကူးစကျနိုငျပါတယျ။ဒီအတှကျ ကိုဗဈနဲ့ ပတျသကျပွီး ဆေးစဈ မှုတှေ စဉျဆကျမပွတျ သတိထား လုပျရပါ တယျ။ အမြိုးသားဓာတျခှဲ ခနျးရဲ့ SWAB TEST စနဈ ဟာ ဈေးမြားတယျ။ အခြိနျလိုတယျ။ စဈဆေးနိုငျတဲ့ အကနျ့အသတျရှိတယျ။ တိကသြခြော မှုတော့ ရှိတယျ။ Rapid Test တှရေဲ့ တိကမြှု ကတေ့ သခြောမှုက အရငျက ၇၈% လောကျပဲရှိ ခဲ့တယျ။ ခုနောကျပိုငျး ၉၈% ထိ သခြော တယျ လို့ ဖတျရ တယျ။ဒါကလညျး ထုတျလုပျတဲ့ ကုမ်ပဏီ ပျေါ မူတညျ တယျ။ ပစ်စညျးအရညျအသှေးပျေါ မူတညျ တယျ ဆိုတယျ။ဈေးနှုနျးကတော့ တ သောငျးမကြျော တဲ့ ပမာဏ နဲ့ စဈဆေးနိုငျမယျ။ အလှနျဆုံး ၁၀ ဒျေါလာသာသာ။ ငှကွေေးအားဖွငျ့ အဆမြားစှာ သကျ သာ လာပါမယျ။
Rapid Test နဲ့စဈပွီး သံသယ ထပျရှိ မှ လကျရှိစဈနတေဲ့ Swab Test ကို ထပျစဈရငျ စဈဆေးရတဲ့ လူ လြော့လာ နိုငျ တယျ။ စရိတျခြုံ့နိုငျ မယျ။Rapid Test မှာ စဈလို့ Positive ဆို ရငျ ခဏယာယီ ခှဲထားလိုကျခွငျးဖွငျ့ လညျး ဆကျလကျပွနျ့နှုနျးကို ထိနျးနိုငျ မယျ။ ကနြျော ကိုယျတိုငျ Rapid Test စဈတာ ခံရတာ ၂ ဆငျ့ စဈတယျ။ သှေးဖောကျတယျ။ပုရှကျဆိတျ ကိုကျတာ ကမှ ပိုနာပါတယျ။ အဖုထ တယျ။ ခုက အဲလောကျမနာပါ။ သှေးစကျလေးကို Test Kit ပျေါတငျပွီး မိနဈ ၂၀ လောကျဆို သှေးရဲ့ ပွနျ့နှုနျးက ပထမ တလိုငျးကို ရောကျမယျ။ အဲမှာ ရပျသှားရငျ Negative ပေါ့။ အဲမှာ မရပျဘဲ ဒုတိယ လိုငျးထိဆကျ ပွနျ့ရငျတော့ လိုငျး ၂လိုငျး ပွတဲ့ Positive ပေါ့။နောကျ နှာခေါငျးနှိုကျ တယျ။ အဲတာက တော့ နညျးနညျး မကျြရညျဝဲရုံပေါ့။ အကောငျးဆုံးက စိတျကိုလြှော့ထားပါ။ ခေါငျးကို ငွိမျအောငျထားပါ။
ပါးစပျကို “အား “လို့ အျောသလို ဟ ပွီး အျောပွပါ။ဒါဆို နှာလမျးကွောငျး ရှောရှောရှုရှု ဖွဈလာပါမယျ။ မနာပါ။၊ တို့ဖတျ Test ကို သူ့ Test kit ဘူးထဲက Gel လေးတမြိုးထဲ စိမျပွီး စောငျ့ ကွညျ့ပါ တယျ။ Rapid Test စဈပွီး ၃ ရကျလောကျ သီးသနျ့ နပွေီးရငျ အလုပျထဲထှကျခှာ ရပါတယျ။ကနြျောတို့စဈတဲ့ အမြိုးအစားဟာ ကိုရီးယား နိုငျငံထုတျပါ။ Rapid Test ဟာ မွနျတယျ။ တိကမြှု တော့ ကနျ့သတျခကျြရှိတယျ။ ၂ % ကိုတော့ ကံပျေါ ထားရပါမယျ။ လူအ မြား ကွား ပွနျ့နှုနျးမွှငျ့ပွီး ခှဲခွားရ ခကျ တဲ့ ခုလို အခါ မှာ သုံးတာ မှနျပါ တယျ။ အလငျြမွနျဆုံး ဆှဲထုတျနိုငျမယျ့ တခုထဲ သော နညျးပါ။